Izinga Legolide Lokumaketha Okuqukethwe | Martech Zone
Izinga Legolide Lokumaketha Okuqukethwe
ULwesibili, May 8, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
INewsreach ikhiphe zombili i infographic kanye nephepha elimhlophe elihambisanayo, Inani Eliyiqiniso Lokumaketha Okuqukethwe.
Izingcezu zomuntu ngamunye zokuqukethwe kwekhwalithi ephezulu ziyakwazi ukuheha nokubandakanya abasebenzisi bewebhu, kepha ngokwabo ngeke kube nomthelela owufunayo. Ukukhangiswa kokuqukethwe kudinga umzamo oqhubekayo wokukhiqiza izingcezu zekhwalithi ephezulu ezintsha, ezifanele. Amabhizinisi amaningi abhekana nezinselelo ekukhiqizeni ivolumu kanye nokuhlukahluka kokuqukethwe okubandakanyekayo okudingekayo, okuyilapho i-ejensi Yokumaketha Okuqukethwe inendima okufanele ilibambe. Njengenqubo yokukhiqiza igolide, izandla zobungcweti ziyadingeka ngaso sonke isikhathi ukuya esigabeni ukukhiqiza umkhiqizo osezingeni eliphakeme kakhulu.
Isibalo esisodwa kule infographic kufanele kube ukuvula amehlo kubantu abakholelwa ukuthi ukuseshwa kufanele kushiywe ngokuphelele: 27 abayizigidi ezingu izingcezu zokuqukethwe zabiwa ngemidiya yezokuxhumana. Lokhu kusalokhu kuqhathaniswa uma kuqhathaniswa ne- 131 billion usesho olwenzelwe okuqukethwe usuku ngalunye. Sikholwa ukuthi ukusesha kuyisisekelo… kepha okuqukethwe okuhle ekugcineni kuzothinta imiphumela yakho yosesho ngenxa yethonya elikhulayo lomphakathi kuma-algorithms enjini yosesho. Ungenzi shiya i-SEO ngokuphelele… Kepha gxila kokuqukethwe okuhle nokukhuthazwa kwalokho okuqukethwe ngaphambi kokukhathazeka ngokufaka amagama angukhiye noma ukuxhumanisa emuva!
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweamasu wokuthengisa okuqukethweinfographic
Amasu Okumaketha Okuqukethwe Wokukhethwa Kokuqukethwe wase-2012
May 10, 2012 ku-11: 55 AM
Siyabonga ngokuthumela uDouglas. Kuyathakazelisa ngempela ukufunda ukuthatha kwakho izibalo.